PAMUSANGANO wepagore weWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania wakaitwa musi wa3 October 2015, Hama Anthony Morris veDare Rinotungamirira vakataura kuti Chikoro chaMwari Choushumiri, Musangano Webasa, uye Chidzidzo cheBhaibheri Cheungano zvichatsiviwa nemusangano mutsva unonzi Ushumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu. Hama Morris vakatsanangurawo kuti Ushumiri Hwedu hwoUmambo huchatsiviwa neUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu​—Purogiramu Yezvokuita Uye Zvichadzidzwa, iyo ine mapeji 8 uye inenge ichibuda mwedzi nemwedzi. Purogiramu yacho yaizova nezvinhu zvichadzidzwa vhiki rimwe nerimwe uye mapikicha anobatsira kuti munhu paanenge achiverenga Bhaibheri anyatsonzwisisa.
Musangano mutsva uyu une zvikamu zvitatu:
Pfuma Iri Mushoko raMwari. Chikamu ichi chinotanga nehurukuro yemaminitsi 10 inenge ichibva pakuverenga Bhaibheri kwevhiki nevhiki uye chine mapikicha anenge ari mupurogiramu yezvokuita uye zvichadzidzwa. Kana hurukuro iyi yapera kunozouya “Kuchera Pfuma muShoko raMwari,” vateereri pavanenge vachibvunzwa vachipindura zvavakawana pakuverenga Bhaibheri kwevhiki iroro. Izvi zvinoitwa kwemaminitsi 8 uye pozopedzisira nekuverengwa kweBhaibheri kwemaminitsi 4.
Shanda Nesimba Muushumiri. Muchikamu ichi, vadzidzi vatatu vanenge vachiratidza zvinoitwa patinoonana nemunhu kekutanga, patinozodzokera uye patinoitisa chidzidzo cheBhaibheri.
Kurarama kwechiKristu. Chikamu ichi chinotibatsira kuona mashandisiro atingaita zvinodzidziswa neBhaibheri muupenyu hwedu. Chimwewo chinokosha chinoitwa pachikamu ichi Chidzidzo cheBhaibheri Cheungano, vanhu pavanenge vachibvunzwa mibvunzo vachipindura.
Pasi rese vaparidzi vari kutenda chaizvo kubatsirwa kwavari kuitwa nemusangano uyu mutsva. Imwe hama yekuAustralia yakanyora kuti: “Musangano weUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu wakanakisa! Zvatinodzidza zvacho zvinonyatsoenderana nezvatiri kusangana nazvo muupenyu uye mharidzo dzacho dziri nyore. Haumbooni kuti nguva yafamba sei, nekuti zvikamu zvacho zvipfupi, zvakajeka uye zvinenge zvichinakidza, kunyanya zvikamu zviya zvine mavhidhiyo uye zvinoita kuti vana vabatanidzwewo.”
Rimwe dare revakuru kuItaly rakanyora kuti: “Musangano mutsva uyu wakatibatsira tose kuti tinyatsogadzirira kuitira kuti tivandudze madzidzisiro edu. Musangano uyu unonyatsoratidza kufambira mberi pamadzidzisiro ari kuita Jehovha vanhu vake. Mumwe muparidzi ane makore 15 akati: ‘Kare zvaindiomera kunyatsoteerera musangano wese. Asi musangano mutsva uyu uri kundibatsira kunyatsoteerera uye kuti ndinyatsogadzirira ndiri kumba.’”
Imwe mhuri yekuAustria yakanyora kuti: “Kuverenga Bhaibheri kwevhiki nevhiki kwataiita nemwanasikana wedu ane makore 10 kwakanga kwakaoma. Asi chikamu chinonzi ‘Pfuma Iri Mushoko raMwari’ chakatikurudzira kuti tiwedzere kusununguka patinopindura. Tose tiri vatatu tava kunakidzwa nekugadzirira kuverenga Bhaibheri kwevhiki nevhiki. Chimwe chinotifadza ndechekuti mwana wedu ari kufambira mberi pakunamata.”
Ines wekuGermany anoti: “Ndinonakidzwa nekugadzirira uye kufungisisa zvatichazodzidza. Ndakanga ndisati ndambotsvakurudza sezvandava kuita. Iye zvino ukama hwangu naJehovha hwawedzera kusimba. Nyika yaSatani inoita kuti ndisare ndarukutika. Asi misangano inondipa simba.”
Ungano dziri kuSolomon Islands dziri kunakidzwa chaizvo nemusangano mutsva uyu wepakati pevhiki uye dziri kushanda nesimba kuti dzinyatsobatsirwa nawo. Ungano dzakawanda dziri kunzvimbo dzisina magetsi neIndaneti, uye hama dzeko varombo uye dzinorarama nekurima. Mavhidhiyo anoshandiswa pamisangano mwedzi nemwedzi vanoawana kupi uye vanoaonera pai? Vaparidzi vemune imwe ungano iri pachitsuwa cheMalaita vakaronga kuti vashande vese pakutengesa macoconut. Mari yavakawana vakaiendesa kuungano kuti itenge mudziyo wekuratidza nawo mavhidhiyo unogona kuchajiswa nesolar. Mwedzi nemwedzi hama dzinoenda kunzvimbo dzinowanikwa Indaneti kuti dzikwanise kudhaunirodha mavhidhiyo, dzozopawo vamwe muungano.
“Kuti ndibate zvinhu zvandinodzidza ndinotoda ari mavhidhiyo kana mapikicha,” yakadaro imwe hama yekuUnited States. “Kwemakore anopfuura 40 adarika ndainetseka chaizvo. Ndaifanira kuverenga ndaverengazve kuti ndikwanise kuzotsanangurirawo vamwe. Saka ndinoda kutenda Dare Rinotungamirira nekutipa mavhidhiyo nemapikicha. Mavhidhiyo ekusuma mabhuku emuBhaibheri akanaka chaizvo, uye mapikicha ari mupurogiramu yezvokuita uye zvichadzidzwa ari kundibatsira chaizvo! Zviri pachena kuti Jehovha ari kukomborera basa ramunoitira vanhu vake. Ndinokutendai chaizvo.”
USHUMIRI HWEDU UYE KURARAMA KWECHIKRISTU​—ZVAKAITA MUSANGANO MUTSVA
CHINANGWA Kuti tiwedzere kunzwisisa Shoko raMwari​—2 Tim. 2:15
ZVINENGE ZVIRIPO Mapikicha, mavhidhiyo uye pekunyora
CHINANGWA Kutibatsira kugadzirira ushumiri​—2 Tim. 4:5
ZVINENGE ZVIRIPO Mavhidhiyo uye mharidzo dzekuenzanisira
CHINANGWA Kudzidza kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri muupenyu hwedu​—1 VaK. 10:31
ZVINENGE ZVIRIPO Mavhidhiyo epaJW Broadcasting uye paChidzidzo cheBhaibheri Cheungano vateereri vanenge vachipindura mibvunzo